Kulanka Dhammaadka Iskoolka ee uu Superintendent Joe Gothard ku qabanayo Khadka Intarnetka
Iyadoo aynu ka murugeysannahay dhimashada George Floyd, afkana ka diidayno caddaalad-darrada ay la kulanto bulshadeenna iyo bulshooyinka kaleba, Superintendent Joe Gothard wuxuu qoysaska u qabanayaa kulan ah khadka intarnetka iyadoo kombiyuutarka la isticmaalayo. Waa Khamiistan, June 4, saacadduna waa 7:30 p.m.
Qoysaska su’aalahooda kulanka ka hor ha ku soo diraan email-kaan: communications@spps.org. Dr. Gothard ayaa ka jawaabi doono intii uu ka gaaro su’aalahaas inta uu socdo kulanka tooska ah. Fadlan soo dir su’aalahaaga ugu dambeyn 4:30 p.m. Talaadada, June 2.
Fadlan guji halkan si aad u soo gashid kulanka khadka intarnetka ka dhacayo: https://eduvision.tv/l?mtytRD
Waxaynu rajeyn inaynu ku aragno Khamiista iyo 7:30 p.m. galabnimo. Haddii aadan awoodin inaad soo gashid kulanka tooska ah, waxaa la soo gelin doonaa barta spps.org oo aad daawan kartaa xilliga kuu shaqeynayo.
Waxaad ku mahadsan tahay inaad ka mid tahay qoyska SPPS. Fadlan ku dedaal bed-qabkaaga, oo nagu soo biir si aynu caddaalad ugu raadinno dhammaan dadka.